တရုတ်မှာဖြစ်နေတဲ့ အဆုတ်ရောင်ရောဂါက Coronavirus အမျိုးအစားသစ် ဖြစ်ကြောင်း အတည်ပြု | MCN (MYANMAR CHANNEL NEWS)
Home သတင္း နိုင်ငံတကာသတင်း တရုတ်မှာဖြစ်နေတဲ့ အဆုတ်ရောင်ရောဂါက Coronavirus အမျိုးအစားသစ် ဖြစ်ကြောင်း အတည်ပြု
A woman walks in front of the closed Huanan wholesale seafood market, where health authorities sayaman who died fromarespiratory illness had purchased goods from, in the city of Wuhan, Hubei province, on January 12, 2020. - A 61-year-old man has become the first person to die in China fromarespiratory illness believed caused byanew virus from the same family as SARS, which claimed hundreds of lives more thanadecade ago, authorities said. (Photo by Noel Celis / AFP) (Photo by NOEL CELIS/AFP via Getty Images)
တရုတ်မှာဖြစ်နေတဲ့ အဆုတ်ရောင်ရောဂါက Coronavirus အမျိုးအစားသစ် ဖြစ်ကြောင်း အတည်ပြု
တရုတ်နိုင်ငံမှာ ပြန့်ပွားနေတဲ့ အမည်မသိသေးတဲ့ အဆုတ်ရောင်ရောဂါ ခံစားရသူတွေမှာ တွေ့ရှိရတဲ့ ပိုးဟာ Coronavirus အမျိုးအစားသစ်တစ်မျိုး ဖြစ်တယ်လို့ ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ (WHO) က အတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။
တရုတ်အာဏာပိုင်တွေဆီကနေ သတင်းအချက်အလက်တွေ လက်ခံရရှိပြီးနောက်မှာ အဲဒီလို အတည်ပြုခဲ့တာ ဖြစ်တယ်လို့ ဇန်နဝါရီလ ၁၄ ရက်နေ့က ဂျီနီဗာမှာ ပြုလုပ်တဲ့ သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတစ်ခုမှာ WHO အရာရှိတစ်ဦးက ပြောကြားခဲ့တာပါ။
ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ ဌာနတွေအတွက် အဲဒီရောဂါကူးစက်မှု ထိန်းချုပ်ရေး ညွှန်ကြားချက်တွေကို WHO က အင်တာနက် ဝက်ဘ်ဆိုက်ပေါ်မှာ ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ အခုလောလောဆယ်မှာ အဲဒီ ရောဂါသစ်အမျိုးအစား အတွက် ထိရောက်တဲ့ကုသနည်း မရှိသေးကြောင်းနဲ့ ဒီထက်ပိုပြီး သုတေသနပြုလုပ်လို့ လိုအပ်လိမ့်မယ်လို့ WHO က ပြောပါတယ်။
ဒီအဆုတရြောငရြောဂါဟာ ပှီးခဲ့တဲ့ ဒီဇငဘြာလကတညြးက တရုတနြိုငငြံရဲ့ ကုနြးတှငြးပိုငြးဖှဈတဲ့ ဟူဘေး ပှညနြယကြ ဝူဟနမြှို့မှာ ဖှဈပှားခဲ့တာလို့ သတငြးတှမှော ဖောပြှပါတယြ။ အဲဒီလူနာတှမှော Coronavirus အမွိုးအစားသဈ တဈမွိုးကို တှေ့ရှိခဲ့ပါတယြ။ အဲဒီဗိုငြးရပဈြကို အခုလစောစောပိုငြးက ဝူဟနမြှို့ကလာတဲ့ အသကြ ၆၀ အရှယြ တရုတအြမွိုးသမီး ခရီးသှားတဈဦးမှာ တှေ့ရှိခဲ့တယလြို့ ထိုငြးနိုငငြံ ကနွြးမာရေးဝနကြှီးဌာနက ပှောပါတယြ။
တရုတျမှာဖွဈနတေဲ့ အဆုတျရောငျရောဂါက Coronavirus အမြိုးအစားသဈ ဖွဈကွောငျး အတညျပွု
ဒီအဆုတ်ရောင်ရောဂါဟာ ပြီးခဲ့တဲ့ ဒီဇင်ဘာလကတည်းက တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ ကုန်းတွင်းပိုင်းဖြစ်တဲ့ ဟူဘေး ပြည်နယ်က ဝူဟန်မြို့မှာ ဖြစ်ပွားခဲ့တာလို့ သတင်းတွေမှာ ဖော်ပြပါတယ်။ အဲဒီလူနာတွေမှာ Coronavirus အမျိုးအစားသစ် တစ်မျိုးကို တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီဗိုင်းရပ်စ်ကို အခုလစောစောပိုင်းက ဝူဟန်မြို့ကလာတဲ့ အသက် ၆၀ အရွယ် တရုတ်အမျိုးသမီး ခရီးသွားတစ်ဦးမှာ တွေ့ရှိခဲ့တယ်လို့ ထိုင်းနိုင်ငံ ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနက ပြောပါတယ်။
Previous articleဂျပန်သံအမတ်ကြီး မှတ်ချက်ကို ဘင်္ဂါလီ အရေး လှုပ်ရှားသူတွေ ဝေဖန်
Next articleမြစ်ဆုံစီမံကိန်း အပြီးတိုင်ရပ်ဆိုင်းပေးရေး တရုတ်သမ္မတ ခရီးစဉ်အတွင်း သံရုံးအနီး ဆန္ဒပြမယ်